December 2012 - မောင်ပေါက် ( Maung Pauk )
Internet ချိတ်နည်း နည်းလမ်းများ
ဖုန်းနဲ့ Computer ကိုချိတ်ပြီး Network သုံးရင်......
Maung Pauk at 10:10:00 PM 2
ဖုန်းရဲ့Computer ကိုချိတ်ပြီး အင်တာနက်သုံးရင်. သတိမထားမိလို့ အခက်အခဲကြုံရတာလေးကို ပြောပြချင်ပါတယ်.. သိပြီးသားသူတွေအတွက် ဘာမှ မဟုတ်ပေမယ့် မသိသေးတဲ့သူတွေ အတွက်တော့ အထောက်အကူဖြစ်မှာပါ.. ကျွန်တော်ပြောမယ့် ဖုန်းအမျိုးအစားက Android သုံးထားတဲ့ ဖုန်းအမျိုးအစား ဖြစ်ပါတယ်..
1.Computer နဲ့ ချိတ်မယ့် ဖုန်းကို USB ကြိုးဖြင့် ချိတ်ဆက်ပါ...
2.ဖုန်းရဲ့ Menu ကိုနှိပ်ပြီး Setting ထဲမှ Wireless and Networks ကိုနှိပ်ကာ Tethering and portable hotspot ကိုသွားပါ။
3.USB Tethering ကိုအမှန်လေးခြစ်လိုက်ပါ။ Set Network Location ဆိုပြီး Box တစ်ခုထပ်ကျလာ ပါမယ်..
4.အဲဒီ Box မှ Home Network ကိုရွေးပေးလိုက်ရင် ဖုန်းနဲ့ Network ချိတ်ဆက်ပြီးနေပါပြီ..
ဖုန်းမှာ အင်တာနက် ချိတ်ထားရင် ကွန်ပျူတာကနေ သုံးလို့ ရပြီပေါ့..
Phone Application Rooting Samsung
Maung Pauk at 4:08:00 PM 1
Credit to : http://www.myanmarplay.com/
e-books Mobile ဆိုင်ရာစာအုပ်
Android Application ရေးသားနည်းစာအုပ်
Maung Pauk at 6:22:00 PM 8
၀င်းဟိန်းရေးတဲ့ Android Application ရေးသားဖန်တီးခြင်းဆိုင်ရာ အခြေခံ သဘောတရားများစာအုပ် ဖြစ်ပါတယ်.. Android Application Programmer များ လေ့လာဖတ်ရှုသင့်တဲ့ စာအုပ်ကောင်းတစ်အုပ်ဖြစ်ပါတယ်..
Download From Solidfiles or Ziddu or SendSpace or Tusfiles
ဝမ်းတွင် အစာမရှိလျှင် (လ္ဘက်ရည်ကြမ်း) သောက်သင့်မသောက်သင့်
Maung Pauk at 5:23:00 PM 0
လက်ဘက်ရည်ကြမ်းဟာ ကယ်လိုရီတွေကို လျင်မြန်စွာ လောင်ကျွမ်းစေပါတယ်။ ဒါကြောင့် အစာစားပြီးတဲ့အချိန်မှာ မှီဝဲတာအကောင်းဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် ဝမ်းထဲအစာမရှိလျှင် မသောက်သုံးသင့်ပါ။
ဖြစ်စဉ်ကဒီလိုပါ။ ဝမ်းထဲမှာ အစာမရှိပါ။ သောက်လိုက်သော လက်ဘက်ရည်က ဝမ်းထဲသို့ဝင်သည်။ ဝမ်းထဲတွင် အစာခြေဖျက်ရန် စောင့်ဆိုင်းနေသော Gastric အက်ဆစ်နှင့် အခြားသောအက်ဆစ်များနှင့် လျင်မြန်စွာဓာတ်ပြုသည် ထိုအခါ ခြေဖျက်စရာ ကယ်လိုရီ အဟာရဓာတ်မရှိသည့်အတွက် ဝမ်းထဲတွင် ရှိသော အက်ဆစ်နှင့် ဓာတ်ပြုပြီး အခြားနေရာများသို့လည်း ပြန့်ကျဲသည် အကျိုးဆက်အားဖြင့် မအီမလည်၊ မသက်မသာဖြစ်ခြင်း၊ ဗိုက်အောင့်ခြင်း၊ ဓာတ်မတည့်၍ ယားယံခြင်း၊ ခြေလက်များ ဖောယောင်လာခြင်း စသည်တို့ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသည်။
Ref : မြန်မာအိုင်တီနန်းတော်မှ ညီမလေး ရဲ့ ပို့စ်
Password ဆိုင်ရာ နည်းလမ်းများ
Rar File Password များအားခြေဖျက်နည်း
Maung Pauk at 8:17:00 PM 0
Win Rar Password Remover ဆိုမမှားပါဘူး။ ဒီနည်းက Software များသုံးပြီး
Crack တဲ့နည်းမပာုတ်ပါဘူး။ Rar To Zip ပြောင်းပြီး Password များကိုခြေဖျက်တဲ့ နည်းလေးပါ။ မြန်မာပြည်တွင်းက ကွန်နဲ့ ဆို ရင်တော့.
ဖိုင်အသေးစားလေးတွေလောက်ဘဲအဆင်ပြေပါမယ်။ ဘာလို့ လဲဆိုတော့ ဒီကောင်က Website ပေါ်ကို Upload တင်ပြီး Download ပြန်လုပ်ရတဲ့သဘောတရားမို့ ပါ။
ပုံလေးအတိုင်းမြင်ရပါမယ်.. ပုံကို ကြည့်ရန်..
ကျွန်တော် အနီနဲ့ ဝိုင်းပြထားတဲ့နေရာလေးမှာ Password ပေးထားတဲ့ဖိုင်ကို ထည့်ပါ။
ပြီးရင် Convert File ကိုနိုပ်လိုက်..
ဖိုင်ကို Upload တင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။
ခဏကြာရင်တော့ သင့်ကို Download ဆွဲဖို့ မေးပါလိမ့်မယ်။ အဲ့အချိန် ကျရင်တော့ ဖိုင်ကို ပြန်ဖွင့်ကြည့်ပါ။
text ဖိုင်တစ်ခုကို password ပေးပြီးစမ်းကြည့်ကြပါ..
ကဲအားလုံးဘဲပျော်ရွှင်တဲ့ ပာက်ကင်းလေး ကို ပျော်ပျော်ရွင်ရွင် စမ်းကြပါ..
Canon Printer Driver Collection - 2
Maung Pauk at 6:05:00 PM 0
Canon PIXMA MP638 MP Navigator EX - 2.0.6
Supported OS: Mac OS X / Windows 8, Windows 8 (x64), Windows 7, Windows7(x64), Windows Vista, Windows Vista (x64), Windows XP, Windows 2000
Canon PIXMA MX366 MX360 Scanner Driver - 17.5.0
Supported OS: Mac OS X / Windows 8/8 x64/7/7 x64/Vista/Vista64/XP
Canon imageRUNNER iR2870 Network ScanGear - 2.30
Supported OS: Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows 2000
Canon imageRUNNER iR2800 PS Printer Driver - 4.90
Supported OS: Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Server 2003, Windows Server 2008, Windows 2000 / Mac OS X
Canon PIXMA MX366 Solution Menu EX - 1.4.0
Supported OS: Windows 8, Windows 8 (x64), Windows 7, Windows7(x64), Windows Vista, Windows Vista (x64), Windows XP
Canon Color imageRUNNER iRC2570i Color Network ScanGear - 2.71
Supported OS: Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows 2000 / Windows7(x64), Windows Vista (x64), Windows XP (x64), Windows Server 2003 (x64), Windows Server 2003 R2 (x64), Windows Server 2008 (x64), Windows Server 2008 R2 (x64)
Canon PIXMA MP258 ICA Driver - Ver. 1.11.0n
Supported OS: Mac OS X 10.6/10.7/10.8 / Windows 8/8 x64/7/7 x64/Vista/Vista64/XP
Canon imageRUNNER iR5570 PostScript3Printer Driver - 4.90
Supported OS: Windows7(x64), Windows Vista (x64), Windows XP (x64), Windows Server 2003 (x64), Windows Server 2008 (x64), Windows Server 2008 R2 (x64)
Canon imageRUNNER ADVANCE iR-ADV C2020 Printer Driver - 20.81
Supported OS: Windows7(x64), Windows Vista (x64), Windows XP (x64), Windows Server 2003 (x64), Windows Server 2003 R2 (x64), Windows Server 2008 (x64), Windows Server 2008 R2 (x64) / Mac OS X
Canon ImageCLASS MF4412/MF4450 Tool Box - Ver.4.9.1.1.mf1
Supported OS: Windows 7, Windows7(x64), Windows Vista, Windows Vista (x64), Windows XP, Windows XP (x64), Windows 2000
Canon PIXMA MP287 Easy-PhotoPrint EX - 4.1.0
Supported OS: Windows 8, Windows 8 (x64), Windows 7, Windows7(x64), Windows Vista, Windows Vista (x64), Windows XP / Mac OS X 10.4/10.5/10.6/10.7/10.8
Canon PIXMA MX426 Solution Menu EX - 1.4.0
Supported OS: Windows 8, Windows 8 (x64), Windows 7, Windows7(x64), Windows Vista, Windows Vista (x64), Windows XP / Windows XP x64
Canon imageRUNNER iR3300 PostScript3Printer Driver - 4.90
Canon Color LBP7200Cd/ LBP7200Cdn Linux Printer Driver - v2.20
Canon EOS 400D Picture Style Editor - 1.8.0
Supported OS: Windows732bit, Windows764bit, Windows Vista 32bit, Windows Vista 64bit, Windows XP SP2, Windows XP SP3
Canon Printer Driver Collection - 1
Maung Pauk at 5:51:00 PM 0
Canon ImageCLASS MF4122/MF4150 FAX Driver - 3.30
Canon imageRUNNER iR2318L UFR II Printer Driver - 20.85
Supported OS: Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows 2000 / Windows 8 (x64), Windows7(x64), Windows Vista (x64), Windows XP (x64), Windows Server 2003 (x64), Windows Server 2003 R2 (x64), Windows Server 2008 (x64), Windows Server 2008 R2 (x64), Windows Server 2012 (x64)
Canon imageRUNNER iR2318L Printer Driver - 20.85
Supported OS: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008
Canon PIXMA MX850 CD-LabelPrint - 1.4.2
Supported OS: Windows 7, Windows7(x64), Windows Vista, Windows Vista (x64), Windows XP, Windows XP (x64), Windows 2000, Windows Me, Windows 98
Canon imageRUNNER iR3570 Printer Driver - v6.90
Supported OS: Windows 2000/XP/Server 2003/Server 2008/Vista/Windows7x32bit
Canon PIXMA iP1980 IJ Printer Driver - 3.00
Supported OS: Linux / Windows 8, Windows 8 (x64), Windows 7, Windows7(x64), Windows Vista, Windows Vista (x64), Windows XP
Canon PIXMA MP145 MP140 Printer Driver - 6.2.4
Supported OS: Mac OS X / Windows 7(32bit), Windows Vista(32bit), Windows XP SP2 or later, Windows 2000 Professional SP4 or later
Canon CanoScan LiDE 700F Scanner Driver - 14.0.6
Canon CanoScan LiDE 110 Solution Menu EX - 1.4.0
Canon imageRUNNER iR4570 PS Printer Driver - v6.90
Canon PIXMA iP4200 CD-LabelPrint - 1.4.2
Canon EOS 60D Digital Photo Professional Updater - 3.9.3
Supported OS: Windows732bit, Windows764bit, Windows Vista 32bit, Windows Vista 64bit, Windows XP SP2, Windows XP SP3 / Mac OS X 10.4.x, Mac OS X 10.5.x, Mac OS X 10.6.x
Canon PIXMA iP2770/ iP2772 Printer Driver for Windows - 7.24.0
Supported OS: Mac OS X / Windows 8, Windows 8 (x64), Windows 7, Windows7(x64), Windows Vista, Windows Vista (x64), Windows XP, Windows 2000 / Windows XP (x64)
Canon Monochrome LBP6000 CAPT Printer Driver - V3.30
Supported OS: Mac OS X / Windows 2000, Windows 2003, Windows 2008, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Canon ImageCLASS MF4412/MF4450 Printer Driver - 2.21
Supported OS: Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 2000 / Windows 8 (x64), Windows7(x64), Windows Vista (x64), Windows XP (x64)
ASUS Drivers PC Drivers
Asus A43S Drivers for Windows 7
Maung Pauk at 5:27:00 PM 0
ဒီဇိုင်းသမားများအတွက် Cupcake logo PSD Frame
Maung Pauk at 3:56:00 PM 0
Delicious Cupcake logo PSD design 1
Download From SendSpace or DirectMirror
Delicious Cupcake logo PSD design 2
Delicious Cupcake logo PSD design 3
Maung Pauk at 6:38:00 PM 1
Galaxy Note II ကို အသုံးပြုသူတွေ မြန်မာဖောင့် ရဖို့ တစ်ခုထဲအတွက် Root ကြပါတယ်…
ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ တစ်ခါတလေ Root နည်း မှားသွားရင် Firmware boot မတက်တော့ပါဘူး
ကျွန်တော်တို့ အဆိုကတော့ ဂန့် သွားပြီ ကြွ သွားပြီပေါ့
ဒါ့အပြင် Firmware မတက်တာက ပြန်ရေးရင် ရပါသေးတယ် ပါဝါတက်မလာပဲ Death Boot ဖြစ်သွားခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ လွှင့်ပစ် ရကိန်းဆိုက်ပြီပေါ့…
မှန်မှန်ကန်ကန် Root နည်းတွေ ပေးဖို့ကတော့ အဓိကပါပဲ
ကျွန်တော်ကတော့ လက်ရှိလောလောဆယ် Galaxy Note2၀ယ်ကိုင်မလို့
စဉ်းစားနေပါတယ် ဒါကြောင့် Root နည်းလေးကို သေချာတာ မှန်ကန်တာ လိုက်ရှာရင်း
ဒီနည်းလေးကိုရပါတယ် Root နည်းက ကျွန်တော်မထွင်ထားပါဘူး ကျွန်တော်က မြန်မာလို
ပြန်ပေးတာပဲရှိပါတယ် တကယ်လုပ်သွားတဲ့သူတွေကို အမြဲတမ်း နိုင်ငံကြီးသားပီသစွာ
ကျွန်တော် Credit ပေးသွားမှာပါ။
ကဲ! အခု စတော့မယ်ဆိုတော့ လိုအပ်တဲ့ Tools လေးတွေ အရင် Download ဆွဲကြရအောင်
ဒီနှစ်ခုရပြီ ဆိုရင်တော့ အရင်ဆုံး Samsung USB Drivers.exe ကို အရင်ဆုံး Run ပြီး Install လုပ်ပေးရပါမယ်..
ဒါမှ Odin ကိုသုံးပြီး Root တဲ့အခါမှာ Driver သိမှာဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တစ်ဆင့်ကတော့ Galaxy Note2Root.zip ကိုဖြေလိုက်ပါ။
အထဲမှာ CWM Root Note 2.tar ဆိုတဲ့ ဖိုင်လေးရယ်
Odin.exe ဆိုတဲ့ Software လေးရယ်ပါတယ်…
Step 1. အရင်ဆုံး ဖုန်းကို ပါဝါပိတ်လိုက်ပါ ၅ စက္ကန့်လောက်ကြာရင်တော့ down Volume Down, Center Home, နှင့် Power buttons သုံးခုကို တစ်ပြိုင်နက်တွဲနှိပ်ပါ။
Step 2. ယခုတွေ့မြင်ရတဲ့အတိုင်း သတိပေးစာတက်လာပါတယ်,ဒါဆိုရင်တော့ Continue လုပ်ဖို့အတွက် Volume up ကို နှိပ်ပေးပါ။
Step 3. ယခုပုံပါအတိုင်း Download Mode ကိုဝင်သွားတဲ့အတွက် USB ကြိုးကို ဖုန်းနဲ့ ကွန်ပြုတာအား ချိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါ Driver မသိခဲ့ရင် အထက်မှာပေးခဲ့တဲ့ Samsung USB Drivers အား Install လုပ်ပေးပါ။
(Driver မရှိလျင် အောက်မှာ Download ဆွဲပါ)
Step 6. Un Zip ဖြေထားတဲ့ Galaxy Note2Root ဖိုင် အတွင်းက Odin3 v1.85.exe အား Click နှိပ် ပြီး Run ပေးလိုက်ပါ။
Step 7. ယခု ဆိုရင် Download Mode ၀င်နေတဲ့ ဖုန်းကို Odin က သိနေတဲ့အတွက် ပထမ ID:COM လေးမှာ High Light လိုင်းလေး မှာ မီးဝါလေး လင်းနေပါတယ် (နောက်ပိုင်း Odin အမြင့်တွေမှာ အပြာရောင် အဖြစ်ပြောင်းလဲထားပါတယ် Odin အမြင့်သုံးလျင် သတိပြုပါ) ဒါဆိုရင်တော့ စတင် Root လို့ရပြီ ဖြစ်လို့ တစ်ခြားဘာကိုမှ ပြောင်းလဲစရာမလိုအပ်ပါဘူး PDA ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးသာ Un Zip ဖြေထားတဲ့ Galaxy Note2Root ဖိုင်ထဲမှ cwm6-root-note2.tar ဖိုင်လေးအား သွားရောက်ရွေးချယ်ပေးပါ။
Step 8. အထက်ပါအတိုင်း ပုံလေးမှာ ပြသထားသလို Root.tar ဖိုင်အား ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ် ပြီးရင်တော့ Start ကိုနှိပ်ကာ စတင် Root နိုင်ပါပြီ။
ယခုဆိုလျင် Start အား နှိပ်လိုက်သဖြင့် Odin မှ ဖုန်းအား Root နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အားလုံးပြီးရင်တော့ Pass! ဆိုတဲ့ အစိမ်းရောင် အကွက်လေး ပေါ်လာရင် အောင်မြင်ပြီးစီးပါတယ် ဖုန်းမှာကတော့ ယခုလို Coding များ Run နေသည်ကို ဆက်လက်မြင်တွေ့ရမှာပါ ဖြစ်နိုင်ရင် ကြိုးကို မဖြုတ်ပဲ ဖုန်းပါဝါတက်လာသည် အထိစောင့်ဆိုင်းပေးပါ။
ယခုဆိုရင်တော့ သင်တို့ အလိုရှိနေတဲ့ Super Man လေး (Super User For Super SU) ကိုရရှိသွားပြီ ဖြစ်လို့
မြန်မာဖောင့် ပဲ ထည့်ထည့် Root Acess တောင်းတဲ့ App တွေ Game တွေကိုလဲ စိတ်ကြိုက် အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။
အားလုံးပဲ ပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေ ခင်ဗျာ
Credits – XDA,Galaxy Note2Root
Recovery img နဲ့ Boot img သွင်းနိုင်မယ့် Android App
Maung Pauk at 11:27:00 AM 0
တစ်ချို့ဖုန်းတွေက Custom Recovery ကို .img နဲ့ပေးပါတယ်.. Browse ထဲက ဒေါင်းထားတဲ့ Recovery img or boot img ဖိုင်ကို ရွေးပြီး recovery ဆိုရင် flash recovery ကိုရွေး
Boot ကို flash boot ကိုရွေးရပါမယ်.. ဒါ့အပြင် recovery ကိုလည်း ၀င်လို့ရပါတယ်.. reboot recovery ကို နှိပ်လိုက်ရုံပါပဲ..
(သတိ= စမ်းလုပ်မယ်ဆို backup အရင် ယူထားတာ ကောင်းမယ်..)
Download Form Hotfile or 4shared
Credit to : Mobile House
IT Knowledge Phone Application
Maung Pauk at 11:10:00 AM 0
Windows 8 Shortcut Keys အချို့
Maung Pauk at 12:58:00 PM 0
Windows 8 ကိုသုံးနေသူများအတွက် Shortcut Keys အချို့ကို ဖေါ်ပြပေးလိုက်ပါတယ်.. အသုံးတည့်မယ်ထင်ပါတယ်..
WINDOWS button + C: to show Chames Bar.
WINDOWS + X Button: to display the Advanced Options, Advanced Optimition atu, which will appear Including, Promt Command, Control Panel, and others.
WINDOWS button + I: to display the Hotspot, Speaker, Power, Keyboard.
WINDOWS button + Q: Directing pal for the Menu Search application on Install.
WINDOWS button + D: to return to the Desktop Mode.
WINDOWS button + H: to Share or shared.
WINDOWS button + M: Almost the same as the Windows + D, to return to the Menu Desktop. But if my friend did not run applications in the DAPT minimized to return to the desktop
WINDOWS button + W: to drive my friend to the Menu Search System.
WINDOWS button + F: to the menu File Serach.
WINDOWS + R button: to display the Run dialog box.
WINDOWS button + E: Windows Explorer to display so much faster.
Windows key - Shows the New Metro User Interface (UI) screen
Win + A / Win + Space - Switches keyboard Layouts
Win + C - Brings Start menu with Time and date
Win + D - Shows the Standard Desktop Screen
Win + F - Allows you to search for files
Win + I – Opens the Settings Sidebar
Win + L - Lock Windows
WIN + O - Applies Rotation Lock
Win + P - Presents with Multi-Monitor options
Win + Q - Lists all Installed applications
Win + W - Instant search for settings.
Win + X - Opens oower user shortcut menu
Win + Y - Desktop Glance
Win + Z - Shows the Application bar in Metro apps,,,,
Functional Keys Shortcuts;—-
Win + F1 - Displays Help
Win + F2 - Rename Item
Win + F3 - Search for files and folders
Win + F4 - Displays items in Active list
Win + F5 - Refresh
Page Up/Down Shortcuts
Win + Page Up - Move Start screen to left Monitor
Win + Page Down - Move Start screen to right Monitor
Win + (1-9) - Switches to the app as numbered on the Taskbar
Arrow Keys Shortcuts
Win + Left arrow- Snaps Desktop Window to left
Win + Right arrow - Snaps Desktop Window to right
Win + Up arrow - Maximizes the Desktop Window
Win + Down arrow - Minimizes or Restores the the Desktop Window